Miyaan maamuli karaa boggayga cirifka dejinta SEO oo leh hababka ugu fiican ee wax ku oolinta?
La qabsashada bogga soo ceshadka SEO leh hababka ugu wanaagsan ee wax ku oolinta waa fure u ah olole xayeysiin ah oo guulo leh. Maxay muhiim u tahay? Sababtoo ah sababtoo ah boggaaga soo degayaa waa xargaha albaabka oo leh "soo dhaweyn" dhammaan martidaada oo kaliya markaad soo galeyso boggaaga liiska natiijooyinka raadinta. Bogga weyn ee soo degaya SEO wuxuu abuuray nidaamyada ugu fiican wuxuu dhiiri galin karaa macaamilkaaga si uu u buuxiyo faahfaahin qaar ama sii wado ballan qaadka iibsashada. Haddii kale, haysashada liidashada saboolka ah badanaa waxaa loola jeedaa dhiirigelinta calaamadeysan oo keeneysa in la xiirto khasaarihii dakhliga buuxa ee ganacsigaaga - grain storage monitoring systems. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad fahamto sida loo abuuro bogga soo degsan oo leh sifooyinka saxda ah iyo walxaha si aad ugu kordhiso isbarbardhiggaaga, marka aad sameysid isticmaalka ugu sarreeya ee ololahaaga PPC tusaale ahaan.
Haddii aad wali dareensan tahay mawduuc cusub, halkan waa liis gaaban oo sababo ah sababta aad bogga soo dhejiso u baahan tahay
bogga soo degaya ee hodanka ku ah ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee ku haboon waxay ku siineysaa ROI macquul ah oo ku saabsan dadaalka dallacsiinta mushahar bixinta
bogagga soo degayaa badiyaa waxay bixiyaan isbeddel wanaagsan, halkii aad ka heli laheyd bogga internetka oo idil
oo ku dhex jira badhanka CTA-ga iyo buuxinta foomamka soo degista wuxuu kaa caawinayaa inaad ku guuleysatid in badan oo adoo helaya xogta shaqsiyadeed ee dheeraad ah
bogga intiisa badan wuxuu bixiyaa horumarka ugu dhakhsaha badan ee sii kordhaya ee isweydaarsiga, macaamiishaada oo diiradda saara hal bog
waxqabadka aasaasiga ah ee bogagga soo degayaa wuxuu noqon karaa calaamad wax ku ool ah si loo qiimeeyo natiijooyinka guud ee suuq-geynta
Sidaa darteed, waxaan aragnaa in qabashada bogga ciribtirka leh ee SEO oo leh hababka ugu fiican ee wax-ku-oolnimada marwalba waa MUST. Fikrad ahaan, waa inaad haysataa xawaarahaaga boggaaga soo degitaanka ugu badnaantii 5s. Dhab ahaantii, waxaa lagu tijaabiyey in bogagga soo degaya oo leh xawaareyn xawli ah iyo jawaab celin inta badan ay helayaan guulo badan oo gaadiid ah. Sida cad, dadka isticmaala badan ayaa tixgelinaya waayo-aragnimo ku-ool ah iyo booqasho waxtar leh oo ka mid ah arrimaha asaasiga ah marka goaan qaadashada go'aanka ugu dambeeya ee lagu iibsado alaab ama amar adeeg. Isla mar ahaantaana, bogga soo degaya oo si fiican loo farsameynayo oo leh xawaaraha gawaarida lagu riixo ayaa yareyn doona darajooyinka sare ee SERPs. Xitaa inkastoo xaqiiqda ah in Google lafteeda ay mar kale dib u heshiisay haddana mar kale: xajinta xawaaraha xayeysiiska lagama qaadayo wax kasta oo toos ah, ugu yaraan hadda. Si kastaba ha ahaatee, imtixaannada wax-barashada ayaa muujinaya xiriirka dhabta ah ee ka dhexeeya xawaaraha xawaaraha ee bogga iyo is-beddelidda fursadaha. Taasina waa sababta ay muhiim u tahay inaad bixiso dareen dheeraad ah oo ku saabsan boggaaga cirifka ah iyo hababka ugu fiican ee aad u isticmaaleyso inaad si sax ah uhesho
. Iyada oo la socda xawaaraha xawaaraha bogga, waxaan ku talin lahaa in baaritaan labalaab ah lagu sameeyo jawaabcelinta moobiilka, maadaama ay hadda noqotay qayb muhiim u ah waayo-aragnimada user-ka wanaagsan ee ay bixiyaan websiyo badan oo ay ku badasho. Iyadoo la tixgelinayo in boggaaga soo degayaa ay horayba u isticmaali lahaayeen mobile-ka, marna ha ka waaban inaad ka dhigto xitaa qaabab badan. Kaliya tijaabooyinka qaarkood A / B si ay u qeexaan waxqabadka ugu wanaagsan ee CTAs, meeleyntooda ugu wanaagsan si ay u qanciyaan dadka isticmaala, wax walbana waxay u soconayaan sida ugu wanaagsan.